Khin Maung Chin: သင်္ကြန်အလွမ်း
13 April 2011 7:44 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ဒီအချိန်ဆို မြန်မာပြည်မှာသင်္ကြန်ကျပြီဗျာ။ မြန်မာပြည်နဲ့ဝေးနေတဲ့သူတွေထဲကထိုင်းတို့မလေးရှားတို့မှာ၊ နောက်ပြီးစင်ကာပူတို့ကိုရီးယားတို့မှာနေနေကြတဲ့သူတွေကတော့ သင်္ကြန်ရဲ့အလွမ်းကို သိသိသာသာခံစားရမှာ၊လွမ်းဆွေးရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာက အမြဲတမ်းနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးများကြတယ်လေ။
ဒါကလည်းကျနော့်အထင်ပေါ့။ ကိုယ်တိုင်တော့တခါမှသင်္ကြန်အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်စွာ နိုင်ငံခြားမှာမနေဖူးဘူး ဆိုတော့... ခုမှဗျာဘဝရှေ့ရေးကြောင့်နိုင်ငံခြားကိုထွက်လာမိပါတယ်. စားလည်းလွမ်း၊သောက်လည်းလွမ်း၊ ဟော...ခုသင်္ကြန်လာတော့လည်းလွမ်းရတာပါပဲ..
♥ ♥ ♥ ♥ ဓါတ်ပုံလေးတွေကိုတော့ ဒီနေရာ ကယူပြီးသုံးထားပါတယ် ♥ ♥ ♥ ♥
ဒါနဲ့ပဲလွမ်းနေတာတွေပြေပါစေတော့ဆိုပြီးတမြို့လုံးပတ်ရှာကြည့်တော့ ရှားရှားပါးပါးမြန်မာပြည်သား သုံးယောက်ပဲတွေ့တယ်ဗျ... သူတို့ကိုအရင်ကတည်းကသိနေပေမယ့် ရှိများရှိဦးမလားဆိုပြီး ရှာကြည့်လိုက်တာပါ။ တစ်ယောက်ကလည်းသင်္ကြန်တွင်းအော်စလိုသွားမလိုလိုလေသံပစ်နေတော့ ကျနော်လည်းသွားချင်သားဗျ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်ကကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးလေ။ ပြီးတော့သင်္ကြန်အကြိုမတိုင်ခင်နေ့မှာကျနော်က ဆေးရုံပြဖို့ရက်ချိန်းယူပြီးသားလည်းဖြစ်နေတော့
'' အစ်ကိုရေ.. အော်စလိုသွားမယ်လို့ကြားတယ်.ဟုတ်လားဗျ ''
'' အင်း..ဟုတ်တယ်ညီ ''
'' အာ..အစ်ကိုကလဲ. နှင်းတွေတောင်မကုန်သေးတာကို သွားပြီးရေဆော့ရင် ဘယ်ခံနိုင်မှာလဲဗျ။
ဘယ့်နှယ့်လဲ '' (အမှန်က အော်စလိုမှာနှင်းတစက်မှမရှိတော့ပါ၊ Summer ထဲကိုစဝင်နေပါပြီ။ ကျနော်သက်သက်လုပ်ကြံပြောခြင်းသာဖြစ်ပါသည်)
ဟာ ဟ.. ကျနော်ပြောတာကြားတော့နည်းနည်းတော့တွေဝေသွားတယ်လေ.. ဘယ်ရမလဲ...
မတွေဝေလို့လဲမဖြစ်ဘူးလေ.. နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင် ကုန်ကျမယ့်ဆေးဖိုးဝါးခကလူကိုတွေဝေသွားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လေ။ ပြီးတော့သူ့မှာလည်း ကျနော့်လိုပဲကူဖော်လောင်ဖက်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတော့...
ကျနော်ပြောလိုက်တဲ့စကားက သူအားခဲထားတဲ့ခရီးစဉ်ကို ဖျက်ပစ်ဖို့အတွက်လုံလောက်သွားတယ်ဆိုပါတော့.......
ပြီးတော့ ရောက်လာတာသိပ်မကြာသေးတော့လည်း ကျနော်ပြောတာတန်းယုံသွားတာလဲပါတာပေါ့ဗျာ။
ထားပါတော့..ဒါနဲ့ပဲမုန့်လုံးရေပေါ်ပဲလုပ်စားကြဖို့အကြမ်းဖျင်း ကျနော်တို့နှစ်ယောက် သဘောတူလိုက်ကြတယ်ဗျာ။။
ခုနက ကျနော်ပြောတာ ဒီမြို့မှာသုံးယောက်ရှိတယ်လို့ပြောထားတာလေ။ ဟုတ်ပါတယ်.. နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ ကျနော်တို့လိုစားပဲစားတတ်တယ်၊မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့အစားထဲက မဟုတ်တဲ့သူငယ်ချင်းလေးပါ။ ကျနော်တို့ကိုအမြဲတမ်းမကြာမကြာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုပ်လုပ်ပြီး ဖိတ်ကျွေးတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းအကောင်းစားကြီးပါ။ လှတာလဲအရမ်းလှတယ်ဆိုပါတော့။
ကျနော်ချက်ချင်းပဲ အဲဒီသူငယ်ချင်းမလေးဆီဖုံးဆက်လိုက်တာပေါ့။ ဒါနဲ့ပဲကျနော်စီစဉ်တဲ့ သင်္ကြန်အစားအစာစားပွဲကြီးဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုပါတော့ဗျာ.သြော်.. အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲလဲပါသေးတယ်နော်။ ပြောဖို့မေ့နေတာ.. ချက်တာကတော့နည်းနည်းပဲချက်မှာပါ။ အဓိက ကလွမ်းနေတာတွေအတော်အသင့်ပျောက်ချင်နေတာလေ... ဒါပါပဲ..
မအိပ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ။ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးပဲ. ဒါဆိုအုန်းနို့ခေါက်ဆွဲနဲ့တော့ဝေးပြီထင်ပါရဲ့လို့ စိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်လေ... အသာလေးအနားကပ်ပြီး ဆရာဝန်ကို ဘယ်နှစ်ရက်အိပ်ရမှာလဲမေးကြည့်တော့မှ ပြုံးပြီး ဒီတစ်ညပဲအိပ်ရမှာပါဆိုတော့ ခုနကတွေးလိုက်မိတဲ့စိတ်ထဲကပဲ ခုပြန်ပြီးသြော်.... မလွဲလောက်ပါဘူး..အနည်းဆုံးတော့ မုန့်လုံးရေပေါ်တော့ဝါးရမှာပါလေဆိုပြီး ဖြေတွေးလေးထပ်တွေးပေးလိုက်တယ်။ ဟီ ဟိ.
အဲတာနဲ့ပဲဒီနေ့မှ ပြန်လာဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ.. သူငယ်ချင်းတွေကဘာလို့ဖုံးဆက်ပြီးမပြောတာတုန်း ဆိုပြီးကောနေတာတောင်ခံလိုက်ရသေးတယ်... သြော်ခေါ်ချင်တာပေါ့သူငယ်ချင်းတို့ရယ်.. သူငယ်ချင်းတို့မှာလဲ အလုပ်တွေကတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့မခေါ်ဖြစ်လိုက်တာပါ။ ပြီးတော့ဒီကဆေးရုံတွေက အဲလိုလူနာစောင့်ခေါ်စရာလည်းမလိုတာလည်းပါတာပေါ့။ အရမ်းဂရုစိုက်ကြတယ်လေ။
(ခေါင်းလောင်းလေးပေးထားတယ်. လှုပ်လိုက်တာနဲ့တာဝန်ကျတဲ့နာစ်မက လာပြီးမေးမြန်းကြည့်ရှု့ပေးနေတာဆိုတော့၊ နောက်ပြီးကျနော်ကလဲအဲလိုမလှုပ်မရှားကြီးလဲနေတဲ့လူနာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူများကို စိတ်မပူစေချင်ဘူးလေ..) ဒါကြောင့်သူတို့ (ဆေးရုံပြရမယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိထားကြတယ်လေ၊ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်းနေရမယ်ဆိုတာမှမသိတာ) ကိုအသိမပေးတော့တာပါ။ အဲဖြစ်ချင်တော့ ကျနော်နေတဲ့မြို့ကတော့မဟုတ်ပါဘူး.. ရထားနဲ့ လေးဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်သွားရလောက်အောင်လှမ်းတဲ့ မြို့ကမြန်မာပြည်သားတစ်ယောက်နဲ့ ကျနော်ဆေးရုံကအပြန်မှာ (သူကဆေးလာစစ်တာပါ) တွေ့လို့ သူတို့မြို့မှာ မြန်မာတွေစုပြီး သင်္ကြန်ပွဲတော်လုပ်ကြမယ့်အကြောင်းပြောပြပြီး ကျနော့်ကိုတောင် ဖိတ်စာတွေဘာတွေပေးသွားသေးတယ်ဗျ. သူငယ်ချင်းတို့ဖတ်ရအောင် သူပေးခဲ့တဲ့ဖိတ်စာကို မြန်မာလိုမပြန်တော့ပဲ နော်ဝေဂျီယံနဲ့ပဲ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ အမှန်က Scanner ရှိရင်ကောင်းမှာ။ မရှိတော့လဲ မရှိသလိုပေါ့ဗျာ..နော့်.. ဟီ ဟိ.
Vi vil gjerne inviterer deg (dere) til vår nyttårsfest.
Nyttårsfesten er den viktigste høytiden for buddhister
Vi skal ha Burmesisk tradisjonelle danser og
Hjertelig velkommen til vårt nyttårsprogram og
Med vennlig hilsen,Burmesisk Forening Stjørdal
ကျင်းပမှာကတော့ 23.04.2011 မှပါ။
ဟီဟိ.. ဖိတ်စာရပြီးတော့မှပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော်တော်သဘောကျသွားတယ်။ ဘာကိုလဲလို့တော့မမေးနဲ့နော်..
ဒီလိုပါပဲဗျာ။ ရေးချင်တာတွေရေးပြီး၊ မိသားစုမောင်နှမချစ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝေးနေရတာဆိုတော့
ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ဖြေရတယ်လေဗျာ.. မနက်ဖြန်ကြရင်တော့ သူငယ်ချင်းမလေးလာမယ်။ သူလာရင်မုန့်လုံးရေပေါ်တူတူလုပ်ကူညီပေးလိုက်မယ်ဗျာ။ ပြီးသွားတော့မှပဲ အစ်ကိုကြီးကိုခေါ်လိုက်မယ်။ လူကြီးဆိုတော့ဘာမှမခိုင်းတော့ပါဘူးလေ... အော်စလိုမသွားလိုက်ပဲ ဒီမှာနေပေးနေတာကိုက ကျေနပ်စရာပါ။
ဘာပဲပြောပြောဒီပို့စ်လေးမရေးခင်ကလွမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးက ခုရေးပြီးသွားတော့ နည်းနည်းလျော့သွားတာတော့အမှန်ပါပဲဗျာ။
အရင်မြန်မာပြည်မှာတုန်းက တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးကြပေမယ့် အခုတော့ ညီရင်းအစ်ကိုမောင်နှမတွေလို သံယောဇဉ်တွယ်နေရတဲ့ညီမလေး Lin နဲ့ ချစ်ကိုကြီးတို့ကို ဒီပို့စ်လေးနဲ့
စာဖတ်ပရိသတ်များကိုလည်း မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။